Ụgbọ elu ụgbọ elu nke India na-eme mgbanwe mgbanwe na e-Governance
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Ụgbọ elu ụgbọ elu nke India na-eme mgbanwe mgbanwe na e-Governance
Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • India na -agbasa ozi ọma • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
India Civil Aviation mmalite nke e-platform
Minista na-ahụ maka ụgbọ elu India Shri Jyotiraditya Scindia bidoro taa eGCA - usoro e-Governance na Directorate General of Civil Aviation (DGCA).
Ebumnuche a bụ iji megharịa usoro na ọrụ nke DGCA.
Mịnịsta na-ahụ maka ụgbọ elu nke otu na-ahụ maka ụgbọ elu na-ekwu na ọrụ a na-egosi mgbanwe mgbanwe site na iwu mmachi gaa na imekọ ihe ọnụ.
Ọrụ enyere ndị DGCA dị iche iche dị ka ndị na-anya ụgbọ elu, nhazi ụgbọ elu, wdg ga-adị na ntanetị na eGCA.
N'ụbọchị India na-eme ememe "Azadi Ka Amrit Mahotsav" iji mee ememe ncheta afọ 75 nke nnwere onwe, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Union Minster of Civil Aviation, raara onwe ya nye eGCA taa, usoro ọchịchị e-ọchịchị na General Directorate of Civil Aviation (DGCA) nye mba. N'oge a, odeakwụkwọ nke Civil Aviation Shri Rajiv Bansal, Director General nke Civil Aviation Shri Arun Kumar, na ndị ama ama nke ụlọ ọrụ ụgbọ elu obodo bịara.
N'ikwu okwu na mmemme ahụ, Shri Scindia kwuru na n'inwe ọhụụ nke Hon'ble Prime Minister of Digital India, DGCA emejuputala usoro e-ọchịchị eGCA. Ezubere ọrụ a na akpaaka nke usoro na ọrụ nke DGCA, yana ọrụ 99 na-ekpuchi ihe dịka 70% nke ọrụ DGCA na-arụ ọrụ na mbido mbụ, yana ọrụ 198 ga-ekpuchi n'akụkụ ndị ọzọ. O kwuru na ikpo okwu otu windo a ga-eweta mgbanwe dị egwu- na-ewepụ adịghị arụ ọrụ nke ọma, na-ebelata mmekọrịta onwe onye, ​​melite akụkọ nhazi, na-eme ka nghọta na ịbawanye mmepụta.
O toro DGCA maka iwebata mgbanwe ngbanwe site na iwu mmachi gaa na mmekorita na-ewuli elu. Minista ahụ kwuru na anyị bidola, njem akwụsịbeghị, na n'oge na-adịghị anya, a ga-enwe ntụlegharị iji ghọta ka ndị ahịa si rite uru na mgbanwe a, yana ihe ọzọ a ga-eme. Shri Scindia kwuru na nke anyị bụ gọọmentị na-anabata ihe, nke, n'okpuru nduzi nke Shri Narendra Modi, gbanwere ihe isi ike nke oge ọrịa ka ọ bụrụ ohere.
Ọrụ a ga-enye ntọala siri ike maka akụrụngwa IT na usoro nnyefe ọrụ. E-platform na-enye ngwọta njedebe na njedebe gụnyere ngwa ngwa ngwa dị iche iche, njikọta na ụlọ ọrụ mpaghara niile, "portal" maka mgbasa ozi na maka ịnye ọrụ ntanetị na ngwa ngwa na gburugburu ebe nchekwa. Ihe oru ngo a ga-eme ka oru di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche DGCA na-enye ma mee ka nghota na nkwuputa na oru DGCA nile. Ejiri TCS rụọ ọrụ a dị ka Onye na-enye ọrụ yana PWC dị ka onye ndụmọdụ njikwa ọrụ.
N'oge mmalite ahụ, Union Minister of Civil Aviation kpughekwara otu ihe ọmụmụ, "DGCA na-apụ na ụgbọ elu dijitalụ," nke na-ejide njem nke DGCA site na mmejuputa eGCA. Ihe ịma aka ndị DGCA chere ihu na usoro ndị e mere iji dozie ihe ndị a site na ikpo okwu eGCA abanyela n'ime ọmụmụ ihe a.
Ọrụ enyere ndị dị iche iche DGCA dị iche iche dị ka ndị na-anya ụgbọ elu, ndị injinia na-ahụ maka ụgbọ elu, ndị na-ahụ maka ụgbọ elu ụgbọ elu, ndị na-ahụ maka ikuku, ndị na-ahụ maka ụgbọ elu, ndị na-azụ ụgbọ elu, ụlọ ọrụ nlekọta na nhazi wdg dị ugbu a na eGCA online. Ndị anamachọihe ga-enwe ike itinye akwụkwọ maka ọrụ dị iche iche wee bulite akwụkwọ ha n'ịntanetị. Ndị ọrụ DGCA ga-ahazi ngwa ndị a, a ga-enyekwa nkwenye na ikikere n'ịntanetị. Emebekwara ngwa ekwentị maka ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị injinia na-ahụ maka ụgbọ elu ka ha lelee profaịlụ ha wee melite data ha na-aga.
Ebumnuche eGCA bụ ihe dị ịrịba ama na njem mgbanwe dijitalụ nke DGCA ma ga-eme ka ahụmịhe nke ndị na-eme ya nwee ọganihu. Maka DGCA, ọ bụ nzọụkwụ na ntụziaka nke "ala nke azụmahịa" Mgbanwe dijitalụ a ga-eweta nnukwu uru mgbakwunye na usoro nchekwa nchekwa nke DGCA.